I-China i-3D embossed iinkuni zeplastiki ezingabonakaliyo zomatshini we-WPC abakhiqizi bodonga kunye nabathengisi | ULihua
Iplastikhi ye-3D ebhalwe ngomlilo yeplastiki yeplastiki edityanisiweyo
Ixabiso:Iidola eziyi-1.58 / M.
3D WPC Wall khazi
I-2.2m, 2.9m, 3.6mor eyenziwe ngokwezifiso
1: Itekhnoloji entsha ye-3D embossing ye-WPC yangaphandle yokuhombisa, ukuhlobisa ukuphucula. Itekhnoloji ye-3D embossing yindlela ekhohlakeleyo yokwenziwa. Ukubopha nganye kuyafana nomfanekiso oqingqiweyo, kwaye imeko yobugcisa kunye nenqanaba lokubonakalayo liphuculwe kakhulu. I-Classical 3D embossing luphuculo olukhulu ekubonakalweni kweenkuni-zeplastikhi, ezingenakuphinda zikrolwe kuphela ngamabhanti kodwa zixhase umkhondo wesiqalo sokukhonkotha.
2: Traditional wpc khazi edityanisiweyo kulula ukuba ulahlekelwe iinkozo phezu komhlaba, super babebhala uhombiso enze ngcono kunayo nayiphi na iinkuni eqhelekileyo edityanisiweyo, kuyinto yendalo ngakumbi nomtsalane, ukubuna ngcono nokukrwela ukumelana.
I-3: Ukubotshwa kwe-WPC ephezulu yeLihua kuzo zonke izibonelelo zepaneli yodonga edityanisiweyo, isagcinwa: ukungena manzi, anti-UV, ukumelana nemozulu, anti-umhlwa, ukuthintela izinambuzane, ukugcinwa okuphantsi, ubomi obude benkonzo njl. iibhodi ezifakwe ngaphakathi ezinzulu zijongeka kwaye ziziva ngathi zinkuni zendalo ngenxa yonyango lwe-3D lomphezulu womphezulu.
Egqithileyo I-3D Deep Embossed Waterproof edityanisiweyo ye-WPC Decking Decking
Okulandelayo: Yangaphandle Waterproof 130x10mm iinkuni zeplastiki edityanisiweyo WPC eludongeni khazi
A: Ngokubanzi, sidinga iintsuku ezili-15 ukuya ku-21 ukwenza ukungunda okutsha, ukuba kukho umahluko, iintsuku ezingama-5-7 kufuneka zenziwe uhlengahlengiso oluncinci.
Q3: Ngaba umthengi kufuneka ahlawule umrhumo wokubumba okutsha? Yimalini? Ngaba siza kubuya nayo le ntlawulo?
I-Q5: Uhlaziya njani iimveliso zakho?
I-Q7: Uyintoni umahluko weemveliso zakho phakathi koontanga?
I-Q8: Ngoobani abasebenzi bakho be-R & D? Zithini iziqinisekiso?
Q9: Iyintoni imveliso yakho ye-R & D?
A: Umbono wethu we-R & D ulunge kwindalo, ulondolozo olusezantsi, ubomi obude usebenzisa kunye nomgangatho ophezulu.
Q10: Zithini iinkcukacha zobugcisa zeemveliso zakho? Ukuba kunjalo, zeziphi ezizodwa?
A: Ukucaciswa kwethu kwezobuchwephesha bubungakanani ngqo, ipropathi yoomatshini, ukusebenza kweAnti-slip, ukusebenza okungangenwa ngamanzi, ubuchule bemozulu, njl.
EBlack WPC Wall khazi
Co-eyandisiweyo WPC Wall khazi
Ukudityaniswa kodonga lweWPC edibeneyo
Ixabiso-olusebenzayo 3D Nzulu Embossed Wood WPC Wall C ...
Inokuphinda isetyenziswe kwakhona iPaneli yokuDibanisa iWPC ePhambili
Ukuphela kunye nokukrwela ukuxhathisa kweenkozo ezinde ...
Ukutshekisha ngaphandle kwe-WPC, WPC nokwadala, ezenziwe ngomthi yeplastiki edityanisiweyo, WPC decking umgangatho, WPC decking edityanisiweyo, WPC decking ngaphandle,